Bisikileta misy herinaratra, 700c bisikileta elektrika, Eropa bisikileta elektrika - IMI
JIANGSU IMI MOMBA
Niorina tamin'ny 2013, Jiangsu IMI dia manana traikefa mihoatra ny 8 taona amin'ny famokarana sy fizarana bisikileta elektrika.
Ny orinasa IMI dia tokony hanao bisikileta elektrika tsara kalitao kokoa ho an'ny fitaterana manokana. Miaraka amin'ny fiaraha-miasa lalina amin'ny haitao farany, afaka manome ny bisikileta elektrika farany manerantany izahay. Manome toky ny fahamarinan'ny haitao vaovao izahay.
VOKATRA MIASA ANTSIKA
Manome bisikileta elektrika isan-karazany izahay; toy ny bisikileta an-tanàn-dehibe, bisikileta an-tendrombohitra elektrika, bisikileta hazakazaka herinaratra, bisikileta enta-mavesatra elektrika, bisikileta elektrika miforitra ary bisikileta matavy elektrika sns.
VOKATRA mbola sarobidy kokoa
E-bisikileta ho an'ny vehivavy
Ny ebike ECOLITE dia natao ho an'ny bisikileta an-tanàn-dehibe mahasalama sy tsy misy ahiahy ary manasongadina kalitao manerana.
Ny EWAY (ao anatin'ny taranaka fahenina ankehitriny) dia bisikileta elektronika am-pototra eo an-tampon'ny modely famokarana bisikileta an-tanàna.
TANANA E-BIKE entana
48V mametaka bisikileta E-bisikileta
Manana hafainganam-pandeha 12 kilaometatra isan'ora izy, milanja 20 pounds eo ho eo ary mandeha amin'ny bateria fosfat lithium izay afaka voaloa tanteraka ao anatin'ny 20 minitra. Ny fiara dia karazana bisikileta elektrika vaovao, manambatra ny tombony roa amin'ny bisikileta aforitra sy bisikileta elektrika.
36V mivalona e-bisikileta
Bisikileta elektrika mivalona tsara tarehy miaraka amina kojakoja vaovao am-polony, nohavaozina ny motera 350 watt, batterie 48v 10.4ah mahery sy maharitra, freins disc.
Mametaka bisikileta E-bisikileta entana
Ny bisikileta mandeha amin'ny herinaratra dia mipoitra eny an-dalambe ao an-tanàna, amin'ny fiaran-dalamby sy fiara fitateram-bahoaka, ary amin'ny tranobe misy ny birao sy ny lalantsaran'ny trano misy antony marim-pototra. Sarotra ny mandresy ny fahamoran'ny bisikileta izay nidina tany ambanin'ny latabatrao — nefa mety hampandeha haingana kokoa sy tsy handoa hetra koa ny fivezivezenao. Mihamaro ny orinasa mihaodihaody hamorona ny masinina mini-commuter farany. Ity no zavatra tadiavina rehefa mila bisikileta kely ianao mandritra ny andro fitsangatsanganana multimodal na mitahiry ao amin'ny trano fonenana — ary maharitra koa ny fivezivezena.
Haingam-pandeha E-Bike 7
Ny bisikileta elektrika elektrika dia elektrika mahery vaika misy endrika elektrika tsara tarehy. Ny e-bisikileta dia tena mora ampiasaina.
Haingam-pandeha E-Bike 11
Voafehinao ny fampiratiana Color LCD izay ahafahanao manapa-kevitra amin'ny haavon'ny fanampiana ilaina, manao ny Roadstar mety tsy ho an'ny fisaka ihany, fa koa faritra havoana kokoa.
Mountain E-bisikileta entana
Ny bisikileta an-tendrombohitra elektrika no zavatra rehetra efa tianao momba ny mitaingina làlana, fa ny ankamaroany. Hafainganana kokoa. Hery bebe kokoa. Halavirana bebe kokoa. Tany bebe kokoa. Nefa mbola mihoatra noho izany aza ny Rail - bisikileta an-tendrombohitra elektrika izay manome anao fifandraisana akaiky kokoa amin'ilay làlana. Ny bisikileta an-tendrombohitra manampy amin'ny herinaratra dia manatanjaka ny herinao am-bisikileta ary manatsara ny fahafinaretana ho azonao eny an-dàlana. Mandehana lavitra kokoa, mandehana haingana kokoa, ary mandehana toerana bebe kokoa amin'ny e-MTB. Ireto ny e-bisikileta mamela anao hankafy bebe kokoa ny zavatra rehetra mahatonga ny bisikileta an-tendrombohitra tsara.
Masinina mahery 350w ao aoriana izay afaka manosika ity bisikileta misy kodiarana matavy amin'ny hafainganam-pandeha hatramin'ny 30 km / ora amin'ny herinaratra madio mandritra ny ora 5-7 ora sy ny famolavolana tantera-drano mahatonga ny bisikiletanao hihazona mora kokoa.
Ny bisikileta elektrika EFATI vaovao dia natao mba handresena ny terrains isan-karazany, sady mahazo aina amin'ny arabe vita amin'ny lalana na amin'ny arabe tsy lavitra.
Fat E-bisikileta entana
Ny kodiarana avo lenta dia mamela anao hihazakazaka fanerena kodiarana ambany, ary ny fanerena ny kodiarana ambany matetika dia miteraka fitsangantsanganana ahazoana aina kokoa. Ny kodiaran'ny bisikileta matavy dia manala tanteraka an'io hevitra io. Raha toa ianao ka mihazakazaka 60+ psi amin'ny bisikileta an-dàlana, 40+ psi ho an'ny hybrid, ary 20+ psi ho an'ny bisikileta an-tendrombohitra, ny bisikileta matavy dia mamela anao hitondra 5 hatramin'ny 10 psi amin'ny kodiaranao. Te hampiditra tsindry ho an'ny lampivato ianao ary hanala ny rivotra ho an'ny mitaingina eny ivelan'ny arabe, fa ny fihenan'ny tsindry kodiarana amin'ny ankapobeny dia mamela ny kodiarana hangeja ny vongan-tany, manalefaka ny dia ho anao.
26 INCH E-Bisikileta
Bisikileta enta-mavesatra feno herinaratra misy fender, jiro miharo, seranan-tsambo USB, ary valizy lehibe any aoriana any.
Bisikileta E-bisikileta 20
Namboarinay ny Escape ho bisikileta elektrika tena mahomby. Matetika ny mandositra amin'ny tanety isan-karazany, manomboka amin'ny fiara tsy mataho-tody, lalana monorail eny an-dàlana ka hatrany amin'ny alàlan'ny fanamoriana eo anelanelan'ny famiazam-boaloboka.
Cargo E-bisikileta entana
Ny e-bisikileta mpitatitra entana dia feno e-bisikileta misy tanjona marobe miaraka amina fender, jiro miharo, seranan-tsambo famahanana USB ary zana-kazo matevina misy tanjona maro. Ampiasaina amina alim-baravarana alimina alim-baravarana miharo asa maro hafa, manohana ankizy, entana, fametrahana harona.